SIDA LOO SAMEEYO BEEHIVE FOR BEES U GAAR AH - BEEKEEPING
Qaybaha dhismaha aasaasiga ah
Ka hor inta aadan abuurin qaab sawireed, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa rugta for bees ka kooban. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in beekeeper isku dayayaan in ay abuuraan cayayaanka sida guryaha taageera baahida bayoolaji. Si kastaba ha noqotee, dhismaha noocan oo kale ah ma noqon doono mid ku haboon beeska. Asal ahaan Dhamaan naqshadaha rugta waxay ka kooban yihiin qolof, laba qaybood, dabool iyo joornaal. Dibedda, waxay u egtahay sanduuq ballaaran oo leh saqaf hoose iyo hoose.
Kabuhu waxay ka kooban yihiin darbiyo. Cabbiradu waxay ku xiran tahay nooca dhismaha. Waxaa jiri kara dhowr. Derbiyadu waa shinni.
Dukaanka lagama yaabo in loo baahdo, si kastaba ha ahaatee, waxay ku habboon tahay ilaalinta malab marka ururinta malabku dhacdo. Waxaa sidoo kale jira podryshnik (version kale ee dukaanka, laakiin iyada oo grooves). Waxay ku taalaa saqafka sare iyo sare. Waxay u adeegtaa sidii kuleyliye. Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa feederaha shinni ee qashinka.
Qeybta hoose waxay ku jirtaa kiiska waxayna noqon kartaa mid la kala saari karo oo aan laga saari karin. Xulashada koowaad waxay kuu ogolaaneysaa inaad si habboon u daryeelto beeska, haddii ay u baahan yihiin gargaar caafimaad. Foomamka aan la kala bixin karin ayaa ah kor u kaca oo u adeega sidii aag dhul ah oo loogu talagalay beeska. Qaar ka mid ah beekeepers waxay sameeyaan saqaf sare oo kuleyl ku dhex jira rugta. Waxaad u diyaarsan kartaa dusha sare ee buulka dabiiciga ah.
Saqafku waa ilaalinta iyo qaybta ugu weyn ee rugta. Waxay awood u leedahay inay qariso cayayaanka ka soo jeeda astaamaha cimilada. Saqafku waa mid taariikhi ah. Marka hore waxay kuu ogolaaneysaa inaad qaaddo rugta.
Xaaladda waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaariyo shinni malab ah. Waxay ka kooban tahay bar sare iyo hoose, iyo sidoo kale laba baararka dhinac. Xayndaabyada waxaa lagu qalabeeyaa qaybiyayaal waxayna ku yaalaan bararka sare.
Sida loo doorto qalabka iyo qalabka lagu abuurayo
Si loo abuuro rugta, waxaa kaliya oo loo isticmaalaa qalabka dabiiciga ah oo tayo sare leh. Qeybaha soo socda, waxaad awoodi doontaa inaad fahamto waxa loo baahan yahay si loo abuuro buul, iyo sidoo kale barashada faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka mid kasta oo ka mid ah qalabka.
Maaddooyinka ugu caansan
Qalabkii ugu horreeyay oo aad loo jecel yahay si loo abuuro rugta - geed. Wuxuu si fiican u neefsanayaa, wuxuuna uumi baxaa uumi. Qoryaha waaweyn, sida geed, kedar, dhoobo iyo qoryo, ayaa badanaa la doortaa. Waxa kale oo aad qaadan kartaa pop, linden ama aspen. Wood waxay leedahay heer hoose oo kulaylka ah kulaylka, ilaalinta bees ee cimilada kulul iyo qabow.
Waa muhiim! Si aad u sameysid finan yaryar, dooran maadi oo aan lahayn meelo qallalan, buro iyo dildilaacyo.
Halista kaliya ee maaddadani waa awoodda lagu hayn karo qoyaanka ka soo galaya rugta.
Caleemaha Plywood waxaa lagu gartaa jawi bey'adeed oo dabiici ah. Waxay aad u culus yihiin oo u dulqaadanayaan gaadiidka. Plywood wuxuu ka sareeyaa qoryaha marka laga hadlayo kuleylka iyo qalajinta. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad daboolatid suunka rinjiga qaasiga ah ee rinjiga iyo xoqin derbiyada rugta leh xumbada polystyrene.
Beeraha noocaas ah, beesku waxay ku bixiyaan tamar yar oo kuleylka ah, sababtoo ah dhammaan gudaha xaaladaha raaxada ee nolosha iyo soo saarista malab waa la abuuray.
Honey waa kuwa ugu caansan, laakiin maaha kaliya ee shinni ah. Sanado badan, bini'aadamku waxa ay si baaxad leh u isticmaali jireen badeecooyin kale oo soo saara shinni: manka, shinni, shinni, propolis, porem, caanaha drones.
Beerwada badani waxay doortaan polystyrene ballaaran, maaddaama ay jaban tahay waxayna leedahay heer aad u sarreeya oo dabays ah. Waa sahlan tahay in la shaqeeyo oo sameeyo dayactirka. Dhibaatooyinka keliya ee maaddadani waa guryaha awoodda hooseeya iyo dhadhanka macaan ee malab, tan iyo shinni waxay dhadhan kartaa dhoobada polystyrene.
Haddii aad rabto inaad soo saaro malab, laakiin aad leedahay lacag caddaan ah, ka dibna waxaad samayn kartaa rugta ka baxsan bac ah xumbo. Naqshaduhu waxay u muuqdaan kuwo aad u iftiimaya, waxay qabtaan diirimaad jiilaal oo waxay qabtaan qaboobaan xagaaga.
Dhibaatada kaliya - rinjiyeynta rugta la dhammeeyey si loo ilaaliyo xumbo ka timaadda dhacdooyinka atmospheric. Xakamaynta Polyurethane loo isticmaalo dhismaha rinjiga. Waxay leedahay heerar hooseeya ee kulaylka, laakiin hantidan waxay faa'iido u tahay abuurista rugta. Xoollaha Polyurethane uma oggolaanayo qoyaan, aan kala-jajabin, ma falgalaan dareeraha iyo waxay ka ilaalisaa buulasha jeermiska iyo fungi. Maaddadu waa mid aad u adag, iyo jadeecadu ma dhaawici karto.
Halista kaliya ayaa ah ololi kara. Laakiin tan waxaa lagu saxi karaa nidaam hawo oo dheeraad ah.
Polycarbonate waxay ku kala duwan yihiin duruufta, fududaanta iyo dulqaadashada. Waxyaabaha ku habboon ilaalinta cayayaanka, maadaama ay u adkeysan karto heerkulka hooseeya iyo heerkul sarreeya, kama cabsanayso in qorraxdu si toos ah u dhacdo. Iyada oo buulkisa ah ee buuggan waxaa lagu hayn doonaa microclimate wanaagsan ee bees.
Liiska qalabka loogu talagalay inuu abuuro guri loogu talagalay shinni
Si aad u abuurto rugta, waxaad u baahan doontaa qalabka soo socda:
Hacksaws of size kala duwan
Xuddun qolka (waxaad qaadan kartaa waqtiga qoob-ka-shaqeeyaha khibrad leh).
Sida loo sameeyo rugta gacmahaaga
Hadda waxaad adigu dooratay qalabka ugu wanaagsan ee aad adigu u soo qaadatay oo aad soo uruurisay qalabka lagama maarmaanka ah, waxaan sii wadi doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan. Qeybaha soo socda, waxaad baran doontaa sida loo abuuro beehive for bees ka soo alaabo kala duwan.
Wixii soo saarista ee rugta, dooro kuraasta alwaax leh qoyaan, taas oo ku kala duwan gobolka ee 15-16%. Iyadoo ku xiran lambarka iyo baaxada jirka ayaa la xushay iyo xaddiga alaabta. Sawirada way ka fiican yihiin inay ka soo qaataan beeyaal qibrad leh.
Waa muhiim! Ku adkee xuduudaha muhiimka ah ee astaamaha muhiimka ah si loo fududeeyo qaliinka.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa guddoonada 4 cm oo weyn si aad u samayso hoosta iyo geedka. Gudaha gudaheeda waxaan sameyneyno sanduuqyo lagu xirayo derbiyada godka.
Waxaan soo saarnaa xariijimo qiyaas ahaan 18x4 mm.
Waxaan ku xirnaa boorsooyinka gabbaadyada, waxay ku dhalaalayaan grooves leh qalfoof cad. Aad bay muhiim u tahay inaad si adag u cadaadisid midba midka kale si aan kala sooc lahayn. Oo sidaasaannu u samaynaa 4 derbi. Waxaad u baahan tahay inaad kiiska ku soo qorto qaababka gaashaan, kaas oo lagu biirin karo caawimaadda carrabka iyo kalluunka kiiska. Qiyaasaha gadaasha iyo darbiyada hore ee 605x320 mm. Darbiyada dhinaca - 530x320 mm. In derbiyada dhinaca waxaan ka dhigaan ololaha 5 mm oo qoto dheer iyo 20 mm ballaaran.
Waa muhiim! M mas u dhexeeya grooves - 450 mm.
Helitaanka abuurista darbiyada dambe iyo derbiyada hore. Waa in lagu dhejiyaa kuraasta ku-meel-gaarka ah laga soo bilaabo kuraasta (dhumucda - 15 mm). Qiyaasaha derbiyadu waa 675x500 mm. Qiyaasaha derbiyada dibadda - 560x500 mm.
Goobaha joogtada ah ee derbiyada dibadda waxay u baahan yihiin in si gooni ah loogu tolaa si ay si haboon u haboonaadaan goobta. Darbiyada gudaha waxaa lagu dhejiyaa daboolka, geesaha waa in si adag loo dhigaa. Qeybta hoose ee kiiska ayaa si fiican loo dhigaa horizontal.
Saldhigyada hoose iyo sare
Tuubada hoose waa in lagu sameeyaa qiyaasta soo socota - 1x25 cm, taas oo ka dhigeysa 5 cm derbiga saxda ah ee rugta. Taaratada ugu sarraysa waxay leedahay cabbir ah 1x10 cm, waa inay ahaataa meel fog oo ah 12 cm oo derbiga saxda ah ee rugta. Dhererkoodu waa 3 cm ka hooseeya geeska baararka sare ee qaabka. Goobta hoose
Qaybta dambe ee heerka hoose waxay lagama maarmaan tahay in la sameeyo dalool daloolo ah si ay u sahlanaato in ay wax ka qabato varroa. Waxaa lagu xiri karaa weelka (xajmiga 45x4 cm).
Iyada oo gacan ka helaya godadka moobiilka, waxaad ku dhejineysaa meel bannaan oo ah rugta qulqulka leh wadiiqooyinka yar yar ee kabaha. Cabbirka - 1.5x2 cm.
Marka la barbardhigo derbiga hore ee kiiska waxaan ku wareejin doonaa lakabka hore ee dabaqa. Dhererka dabaqa waa 65 cm. Guddiga ugu horeeya waa in la dhigaa si uu uga baxo 1 cm oo ka baxsan jidhka, waxaan ku dhajineynaa guddiyada soo gelista. Kadibna waxaan garaacnay inta kale ee dhulka la dhigo. Taas ka dib, galka kiiska dib u jeex oo lakabka lakabada iyo alwaaxda. Lakabka soo socda ee dabaqa - guddiyada.
Ka dib markaad dhulka qabatid oo aad garaacdid derbiyada gudaha, ku dheji derbiyada dibadda. Xagasha hore iyo gadaal ayaa looga jeedaa xagga hoose ee jirka. Wareegyadu waa inay ka baxaan 2 cm ka baxsan derbiyada gudaha. Waqtigan xaadirka ah waxaan dul saarnaa rinjiga derbiyada. Guddiga hore waa inuu jaraa godadka saxanka. Dhabarka dambe waa inuu ahaadaa daloolka booska hoose.
Sidoo kale, waa in lagama maarmaan u ah in la sii wado darbiga derbiyada dibadda.
Dhamaadka darbiga iyo derbiyada hore, kaas oo mashruuca 2 cm ka baxsan derbiyada hoose ee gudaha, kuraasta dibedda ah ee 15 cm qaro waa in la buuxiyaa, 4x2 cm strips waa in lagu qodaa hareeraha wareegga wareega gudaha derbiga gudaha.
Dhinacyada hore iyo gadaasha ee rugta, lakabka waa in la xushay (cabbir 1x1 cm) si aad u sameyso xawaaraha. Xayawaanka waa in si adag loo dhigaa walxaha rinjiga. Waxyaabaha kuleylka leh
Si aad u buuxiso booska is-dhaafsiga ah waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho dharka. Waa inay noqotaa mid aad u qallajisa, maaddaama noocan oo kale ah xayawaanku si fiican ayuu u buuxin doonaa.
Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa xumbo, xayawaan, dhogor, dhogor iyo jiir.
Maadaama ay beeraleydu inta badan leeyihiin inay kor u qaadaan saqafka oo dib u celiyaan, badeecadu waa inay ahaato iftiin. Taas awgeed waxaad u baahan tahay dunta. Waa in lagu sameeyaa dherer ah 12 cm laga bilaabo kuraasta oo leh dhumuc of 15 cm. Dusha sare ee buulka dabaqa hoostiisa, waxaa lagama maarmaan ah in laga tago meel bannaan oo ah 24 cm oo dherer ah. Meeshan waxaan leenahay dukaanka yar yar iyo barkad kulul.
Barkimada waxaa la dhigaa labada dhinac ee dusha sare ah si ay ugu haboonaato derbiyada guddiga.
Barkadu wuxuu qaadaa 1 cm ka sareeya buulka. Cabbirka - 75x53. Maqsinnada oo dhererkeedu yahay 10 cm, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa dhoobada, laakiin waxaa fiican inaad u isticmaashid waraabinta derbiyada dhinaca.
Inta u dhaxeysa hoose iyo geeska hoose ee godka, ka tag 1 cm for marinnada of bees iyo hawo qaboobaha xilliga qaboobaha.
Ma taqaanaa? Waxaa fiican in rinjiyeynta cad ee rugta, sababtoo ah midabkani waxaa si fiican u xusuustaa cayayaanka.
Laga soo bilaabo xumbo
Si aad u sameysid rugta xumbada, waxaad u baahan doontaa caleemo xajin (5cm), xargaha ciidda yar yar, rinjiga biyaha, ciddiyaha dareeraha, rinjiga rinji, mastaradda, bareeriga (bareega), mindi qalabaysan iyo sawir wareega.
Waa muhiim! Dhamaan walxaha rugta waxay ku xiran yihiin isla sida ay aasaaska alwaaxda buulkoodu u noqdaan beeska.
Xaashida xayawaanka waa inay ahaataa cabbirka xajmiga ah - 3x5 cm Warqad ku samee warqad qaab dhismeedka oo u wareeji xumbada adoo adeegsanaya calaamadeeyaha iyo taliyaha.
Qalbinta naqshad leh mindi qalabeysan, sawir ama jajab. Qashinka nadiifinta waan nadiifinaa. Darbiyada derbiyada waxaa lagu dhejiyaa qulqulatooyinka (isgoysyada, gooyaa qulqulka iyo si adag u xoqo derbiyada midba midka kale). Qalabyada waxaa lagu hagaajiyaa ciddiyaha dareeraha.
Si aad u hubiso natiijada, waxaad isticmaashaa muraayadaha wareega wareegga.
Xaaladda waxaad u baahan doontaa 8 taarik oo bir ah. Afartan saxarood waxay ka dhigi doonaan xuduudaha dibedda ah, afarta qoladood ee soo haray waxay sameyn doonaan gudaha gudaha. Kala iibiyayaashu waa in lagu rakibaa saxan gudaha ah. Dariishada dibedda waa in la xoqo.
Iridda gudaha gudaha ee xayndaabyada dibadda waxay u baahan yihiin inay xirtaan godka birta, iyagoo ka sameysanaya jajab jirka ah ee qabsashada.
Saldhigga iyo daboolka waxaa lagu sameeyaa grooves. Taargooyinka ayaa lagu gelin doonaa iyaga. Dhinacyada geesaha ah waxay ku soo rogayaan xariijimo biraha ah iyo feero faahfaahin ah.
Ku dheji godadka gudaha weelka gudaha iyo dibedda ee kiiska iyo dabool. Oo markay soo wada ururaan waa inay girgiraan iyaga iyo innaba.
Bolts waa in lagu dhejiyaa ulaha, adigoo haysta qaabka oo dhan si adag. Ka daboolka waa inuu godadka ka dhigaa inuu ku shubo isku dar ah iyo furaha fiilada. Waxay xirayaan godkan. Hooska iyo saqafka
Soolku wuxuu u baahan yahay 2 qaybood oo kala duwan. Mid waa inuu leeyahay dhinacyo soo jiidan dhinaca geesaha, kan kalena waa inuu lahaadaa qayb ka mid ah qaybta hoose ee gudaha.
Qeybta hoose waa qaab la qaabeynayo oo leh dhexda birta ee dhexda. Waxaa laga sameeyaa baararka sheybaarka ee poliurethane. Iskuday iyaga.
Waa inaad haysataa 4 foom oo loogu talagalay baararka. Dhammaan baararka waxaad u baahan tahay inaad ku dhejiso wareega gudaha ee fiilo bir ah oo qaabeyn doona dabool. Waxaan ku ridnaa weelka birta ah iyaga oo leh tuubo.
Booska hore wuxuu ka fiican yahay inuu leeyahay dherer hoose si uu u helo booska loogu talagalay saxaarada. Ka dib markaad rinjiga ku rido, dooro geesaha gudaha derbiyada gudaha ee gunta hoose. Iska yaree polycarbonate. Muraayada dambe ayaa sidoo kale lagu dhigayaa meel hoose oo dherer ah si aad u geliso mandheerta galkaan. Diyaarinta isku dar ah ee xumbada poliurethane
Waxyaabahan waxaa lagu helaa falcelinta poliol iyo polisozonat.
Markaad ku shubtid isku dar ah, waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo xisaabiyo tirada guud ee geedi socodka. Tan waxaa lagu sameyn karaa iyada oo la xisaabinayo mugga qaybta rugta: ku dhufo dhererka, dhumucda iyo dhererka. Tirada natiijada soo baxda waa in lagu dhufsadaa isku dheelitirka khasaaraha tiknoolajiyada (1.15) iyo cufnaanta qiyaastii xumbada caamka ah ee polyurethane (60 kg / m2).
Wixii hal rug ah rugta leh dhumucdiisuna tahay 5 cm, qiyaastii 1.5 kg oo ah polyol iyo 1.7 kg of polyisoconate yihiin la wada baabbi'iyey.
Waa muhiim! Waa lagama-maarmaan in la buuxiyo si dhakhso ah oo isku-dhafan 10 daqiiqo gudahood maxaa yeelay si dhakhso ah ayey u adag tahay.
Isku darka iyo daadinta waxaa jira qalab gaar ah oo bixiya oo kululeynaya isku dar ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad ku sameyn kartaa qalab dhisme. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ku shubtid polyisozonate ku rid weel dabacsan oo isla markiiba bilow inaad ku qasi kareysid qalab. Ka dibna ku shub polyol iyo isku dar walxo 3 ilbidhiqsi. Ka dib, in xayawaanka poliurethane dhameysatay si deg deg ah ku shubaa caaryada.
Diyaarinta iyo tuurida foomamka
Qayb ka mid ah foomka soo galaya ee isku dhafka ah waa in lagu daaweeyaa xal wax lagu shubo gaaska.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo oo kaliya qaybta iftiinka ah ee la dejiyo.
Ka dib markii la shaqeynayo, soo aruuri foomka. Taarikada gudaha waxaa lagu rakibay shabeelada salka, iyo gudaha saxarada waa in lagu rido geesiyado caag ah kuwaas oo u adeegi doona sida daboolka loogu talagalay. Qalbadaha waxaa lagu dhejin karaa xadhig khafiif ah.
Ku rakib oo ku dheji nalka iyo kabaha gudaha. Ka dibna waxaan ku rakibnaa taakulada dibadda oo iyaga ku dheji dhejiyo, iskudubka sare ee foomka leh boorarka ku yaal derbiyada. Dhamaan waxaanu ku dhejinaynaa ulaha birta.
Foomkan waxaan ku shubi karnaa isku dhafka dheecaanka polyurethane ee godadka, laakiin maaha gebi ahaanba, sida ay u fidiso. Sida ugu dhakhsaha badan ee xayawaanku u bilaabmayo inay ka soo baxaan daloolka, foomka waa in lagu xiraa valve.
Sidoo kale waxaan sameynaa buuxinta foomamka daboolka iyo hoosta. Ka dib markaad ku shubeyso caaryada daboolka, ku shub qadar yar oo jeex ah si aad u daboosho dabacsanaanta inta lagu jiro gustsada dabaysha.
Isku darku wuxuu adkeeyaa 30 daqiiqo gudahood. Ka dib markaa, xirtii guntashooyinka qaata ulaha. Isticmaalida xashiish alwaax iyo digaag waxaan garaacnaa qaybta sare ee foomka.
Ka dib markaa, gawaarida xadhigga ku yaal cidhifyada foomka, adoo samaynaya waxoogaa yar, si aadan u dhicin dhismaha. Sidaas awgeed waxaannu ku wareegaynaa laba wareeg oo dhan, oo ka dibna waxaan ka saarnaa cidhiidhi. Qaybaha foomka waa la nadiifiyaa qaybaha xayawaanka ee polyurethane, iyo in ka badan cidhifyada kiiska waxaa laga saari karaa mindi fiiqan. Ka dib markaa naqshadeynta waxaa lagu nadiifiyaa maqaar ganaax ah.
Markaas badeecada ayaa lagu daboolaa ranjiga rasaasta ah ee dhejiska si loo ilaaliyo rugta shucaaca ultraviolet. Dareeraha noocan oo kale ah ma saameyn doono isbedelka heerkulka.
Midabeyntu waxay dhacdaa toddobaad gudahood ka dib wax soo saarka, laakiin aan ka horeyn 8 saacadood.
Hadda waa inaad la tacaaltaa qalabka of rugta for bees.
Habka Mareykanka ee beekhaaminta, 5 nooc oo ah qoysaska cayayaanka ayaa loo abuuray astaamaha: hooyada, aabaha, bilowga, dhalinyarada iyo macalinka qoyska. Qaabkan, waxaad u baahan tahay inaad hayso sariir-jiif 24 dabayl, jajab, labo diaphragms oo si xor ah u dhaqaajin doona rugta, hal ilbuun oo indho-furan oo leh faashad caag ah, hal diaphragm oo leh shabakad kala gooni ah. Waxa kale oo loo baahan yahay barkimo iyo barkimo. Xilliga dayrta ama gu'ga waxaan degeynaa qoys leh boqoradda qabiilka qabaa'ilka. Xilliga dayrta, waxaa lagu quudin karaa malab iyo perga, waxaa lagu daaweeyaa for varroosis waxayna ka hortagayaan hanta-ka-hortagga. Guga cayayaanka ayaa quudiyay malabkii la perga.
Ma taqaanaa? Foomiintu maaha mid dabaysha shimbiraha, laakiin kaliya ayaa dabka shidaya. Bees waxay cunaan malab badan waxayna u duulaan meel kale.
Naqshadahan waxaa lagu soo celin karaa oo kaliya haddii ay jiraan sawir ah rugta. Muxuu noqon doonaa mid ka fiican rugtaada - aad doorato. Isticmaal talooyinkayaga si loo abuuro rugta ugu fiican.